Iyo yekutanga yeruzhinji beta ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.1 uye tvOS 11.1 yave kuwanikwa | Ndinobva mac
Ivo vakomana veCupertino vakatanga denderedzwa rekutanga remabhesi nezuro mushure mekuburitsa vhezheni dzekupedzisira dzeanoshanda masisitimu avakange vachishanda mumwedzi ichangopfuura. Kutanga, uye senguva dzose, yekutanga beta ye macOS High Sierra yaive yakagadzirirwa vagadziri. Maawa makumi maviri nemana gare gare, vakomana vanobva kuCupertino vaparura beta imwechete mukati mevoruzhinji beta chirongwa, kunyanya vhezheni 24, kuitira kuti vese vashandisi vari chikamu chechirongwa ichi. Iwe unogona kutotanga kunakidzwa nekuvandudzwa uko iyi vhezheni nyowani ichativigira.
Asi haisiriyo yega yeruzhinji beta iyo Apple yakatangisa nezuro, sezvo yakaitisawo vashandisi veTVOS yeruzhinji beta, iyo beta yekutanga yekuvandudza iyo ichasvika mumwedzi inotevera yeTVOS, vhezheni nhamba 11.1. Semazuva ese, Apple haina kutsanangura zvirinani zvichauya kubva paruoko rweeshanduro idzisekushandisa kwawakaita tambo yakajairika yekuvandudza mashandiro uye madiki mabhugi.
Zvinotaridza sekunge vhezheni yekupedzisira ye macOS High Sierra yauya hafu shoma, kubvira haipe rutsigiro rweFusion Drive discs, chigadzirwa cheApple icho chisina kuzopedzisira chabudirira mumusika. Aya madhiraivhu akaomarara panguva ino haapindirane neiyo fomati nyowani yeAPFS, kunyangwe vaive mubeta rekutanga iro rakatangwa pamusika.
Rimwe dambudziko tinoiwana pane OWC SSD inotyaira, disks izvo zvisingawirirane parizvino neMacOS High Sierra, kuitira kuti varege kubvumidza yazvino vhezheni yeanoshanda system yeMac kuiswa.Sezvo nedambudziko neFusion Drive disks, Apple inoti iri kushanda kugadzirisa izvi matambudziko kuenderana kuitira kuti vashandisi vakakanganiswa vagone kunakidzwa neiyo nyowani faira sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Yekutanga yeruzhinji beta ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.1 uye tvOS 11.1 yave kuwanikwa
Informant yeMac, iyo khalendari inosanganisa mabasa, zviitiko, mapurojekiti uye zvimwe